मेरी सासुका कारण मेरो छोराको तस्विर बाहिर ल्याउन सकिन भन्दै भक्कानिइन् कमेडियन भारती – Sandes Post
April 22, 2022 1637
कमेडी क्वीन भारती सिंह आमा बनेदेखि नै क्लाउड नाइनमा छिन् । भारती र हर्ष छोरा ‘गोला’सँग रमाइलो गरिरहेका छन् ।
भारती सिंह आमा बनिन् तर उनले आफ्नो सानो राजकुमारको अनुहार भने देखाएकी छैनन् । आखिर यसको कारण के हो ? भारती सिंहका फ्यानहरू आफ्नो बच्चाको एक झलक हेर्न आतुर छन् । त्यसोभए भारतीले आफ्नो ‘गोला’ को झलक कहिले संसारसामु प्रस्तुत गर्ने ?
भारतीले आफ्नी आमा र सासुले बच्चाको फोटो कसैलाई नदेखाउन आग्रह गरेको बताइन् । बालबालिकाको तस्बिर ४० दिनसम्म सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न नहुने उनीहरुको आमाको भनाइ छ ।
बुढापाकाको यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै भारती सिंहले छोरा गोलाको अनुहार लुकाउने निर्णय गरेकी छिन् । भारती सिंह भन्छिन् कि यदि ठूलाहरूले यस्तो भनेका छन् भने, केहि भएको हुनुपर्छ।
Prev१२ वर्षीय नेपालका गेन्जी राईले विश्व बक्सिङ प्रतियोगिता (वर्ल्ड युथ मुआ थाईमा) भाग लिँदै, हार्दिक शुभकामना….
Nextलाइसेन्स निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? आयो खुसीको खबर